URancho Justika-ukuphumla, uhambo kunye neeholide! - I-Airbnb
URancho Justika-ukuphumla, uhambo kunye neeholide!
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguJustyna
UJustyna ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Ukuba ujonge uxolo, ukuthula, indawo enkulu-iRancho Justika yeyakho!
Sinikezela ngesiza esikhulu somhlaba (1,550 sq m) ukuze sisetyenziswe ngokukhethekileyo ziindwendwe zethu. Indawo yayo inamahlathi ngokuyinxenye, enika isiqabu elangeni ehlotyeni, kwaye ibandakanya indawo evulekileyo elungele imidlalo kunye nemisebenzi kunye nabantwana okanye izilwanyana zasekhaya. Okwangoku, unokuphumla kwi-swing okanye kwi-hammock ejinga phakathi kwemithi. Indawo yonke ibiyelwe kwaye ikhuselekile kubantwana nakwizilwanyana.
Indawo efanelekileyo yokuphumla okungenakulibaleka esifubeni sendalo. Iintsasa zingaqalwa kwi-hammock kwi-terrace yendlu kunye nekomityi yekofu. Iintsuku eRancho Justika zinokusebenza zombini kwaye zonqene kakuhle. Uhambo, ukuhamba, imidlalo, ukutshisa ilanga ngencwadi, ukujonga indalo kunye nokutya kosapho ngaphandle yinkqubo yethu yemihla ngemihla apha. E-Ligota unokufumana incasa ye-idyll yasemaphandleni, efunwa kakhulu ngabantu abahlala kwindawo ephithizelayo yesixeko. Nangona kunjalo, ubusuku kunye nobusuku zezona zintle apha. Isibhakabhaka, esingaphazanyiswanga yingxolo yokukhanya, sibonisa amaqela eenkwenkwezi ngokugqibeleleyo, kwaye ehlotyeni kukho ubusuku apho unokuncoma i-comets eziwayo ezibizwa ngokuba yiPerseids. Ngeentsuku ezibandayo, unokufudumeza indlu kunye nosapho kwindawo yomlilo enomtsalane.
Sikhulise abantwana bethu apha ngokwethu kwaye siphunyuke kwisiphithiphithi somzi, kwaye olu hambo olulula kodwa oluhle lwahlala luhlala kwinkumbulo yentsapho luhlala ludlula naluphi na uhambo olubizayo lwangaphandle.
Kufuphi neploti yethu kukho indawo yokugcina amanzi e-Kobyla Góra eneendawo zokuhlambela, igastronomy encinci kunye ne-marina enethuba lokuqesha izixhobo ezidadayo.
Kukwakho nebala elitsha lokudlala labantwana ebumelwaneni, kunye nendawo yokuzivocavoca yangaphandle yabantu abadala.
Kwilali unokufumana amaqanda amatsha kumafama asekuhlaleni.
Ngethuba lokuphumla, unokuhamba ngeebhayisikili eziqeshwe kwindawo, intlanzi kwi-lagoon kunye namachibi ajikelezileyo.
Ukusondela kwehlathi kukuvumela ukuba ubone izilwanyana zasendle - ezininzi zexhama, imivundla kunye nexhama. Iindawo ezinamahlathi abanzi zivumela ukuvunwa kwe-blueberry ehlobo, kwaye ekwindla - ukuvunwa kwama-mushroom ngempumelelo.
Ngexesha lohambo lwasekuhlaleni, unokufumanisa ubuhle bamachibi e-Rybina, amabhodlo ecawa yeGothic ePisarzowice, okanye induli enkulu kunazo zonke e-Wielkopolska kunye nendawo yohambo lwendawo - iKobyla Góra.
Umbuki zindwendwe ngu- Justyna